Suuqgeyaasha B2B Waxay Guul Ka Gaadheen Suuqgeynta Mawduuca | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 6, 2013 Kelsey Cox
Sannad kasta, xaddiga lacagta la geliyay suuq-geynta xeeladaha ayaa u muuqda inay sii kordhayaan. Gaar ahaan, suuqgeeyayaasha mawduucyada 'B2B' waxay raadinayaan inay kasbadaan wacyiga sumadda, jiilka hoggaaminta, helitaanka macmiilka iyo daacadnimada, taraafikada websaydhka, iyo iibka iyaga oo adeegsanaya waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Maaddaama ay suuqyayaashu si aad ah ugu xeel dheer yihiin xeeladaha ay u adeegsadaan inay ku qaybiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, xeelado noocee ah, barnaamijyo, iyo isbeddello ayaa soo galaya faa'iidooyinka ugu badan? LinkedIn la xulufada SuuqaProfs iyo Machadka Suuq-geynta Macluumaadka si looga jawaabo su’aashan, loona kala jaro muuqaalka hadda jira.
Xogta ayaa muujineysa in 73% suuqleyda ay abuurayaan waxyaabo badan marka loo eego sanadkii la soo dhaafay iyo suuqleyda ugu guuleysiga badan waxay ku dhiirrigelinayaan waxyaabaha ay ka helayaan 7 aaladaha warbaahinta bulshada, oo ka soo horjeedda kaliya 4 ee ay adeegsadaan kooxaha waxtarka yar. Infographics waxay cadeyneysaa mid ka mid ah istiraatiijiyadda ugu guuleysiga badan, oo ku sii kordheysa sumcadda 51% ee suuqleyda B2B sanadkan, ilaa 13% sanadkii ka horreeyay. 91% ee suuqleyda B2B waxay doorbidaan inay ku dhiirrigeliyaan waxyaabaha ku jira LinkedIn, oo ay ku xigto Twitter 85%. Soo ogow tabta suuqgeynta suuqgeynta suuqgeynta B2B ay inta badan isticmaalayaan iyo kuwa ay rumeysan yihiin inay ugu waxtar badan yihiin infographic hoose.
Tags: suuq geynta b2bxogta b2bb2b infographicContent Suuqinfographicmarketing
Nov 14, 2013 at 9: 48 AM
Kelsey, xog weyn halkan !! Qoraal aad u xog badan oo ka caawiya suuqleyda kale inay arkaan waxa ugu sareeya fasalada suuqleyda si wax ku ool ah u sameynayaan !!
Nov 14, 2013 saacadu markay tahay 8:36 PM
Aad baad u mahadsantahay! Waan ku faraxsanahay inaad ku riyaaqday qoraalka iyo garaafka.